I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana - [Ukubonisana kwamazwe ngamazwe]
> I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana
2018-09-20 2019-05-22 Ukubonisana kwamazwe ngamazwe Iwebhu
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : Ama-Amazon axhumanisa ama-globalizer
I-Universal Amazon ibambisene isixhumanisi
I-Amazon OneLink isinyathelo 1 sixhumanisa ama-akhawunti akho
I-Amazon OneLink isinyathelo 2 eyodwaTag - kopisha ikhodi
I-Amazon OneLink isinyathelo 3 qala ukuzuza
I-Amazon OneLink ayisebenzi
I-Amazon isanda kumisa i-Amazon OneLink ebambisene, indlela yayo yokwakha izixhumanisi zomhlaba wonke emikhiqizweni e-Amazon ehambisana nomgwaqo wamazwe omhlaba.
Ngaphambi, abasebenzisi kwakudingeka banikeze ngezixhumanisi ngezixhumanisi kwi-Amazon indawo yomhlaba wonke kuya kuzivakashi zewebhu, noma banikeze uhlu lwezixhumanisi futhi vumela umsebenzisi akhethe ukuthi yikuphi okuzochofoza.
Manje, konke okumele sikwenze ukuxhumanisa ama-akhawunti e-Amazon, bese ufaka ikhodi encane kuwebhusayithi ukuze ube nezixhumanisi ngokuzenzakalelayo eziqondisa kabusha esitolo sangaphakathi sase-Amazon - noma esiseduzane - esivela kusixhumanisi somhlaba wonke esiyingqayizivele nendawo yonke!
Ukuze wenze kanjalo, ngena ngemvume kwi-website ye-Amazon US. Uma engabhaliswanga okwamanje ku-Amazon US, sekuyisikhathi sokudala i-akhawunti, njengoba kuyoba yindawo ephakathi kwamanye amazwe amazwe e-Amazon.
Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon lobulungu login
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon lobulungu login
Ngemva kokungena ngemvume, yiya ekhasini le-OneLink, ku-Amathuluzi> OneLink, okudalwe kamuva ku-September 2018.
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : I-Amazon OneLink
Lapho, xhumanisa i-akhawunti ephakathi yase-US wonke amanye ama-akhawunti ongase abe nawo. Uma ungenayo ama-akhawunti wendawo, unganqikazi ukuwadala ukuba azuze kusixhumanisi sendawo esitolo esiseduze.
Ekuvuleni kwe-Amazon OneLink, amazwe alandelayo avulekele izinhlelo zamazwe ngamazwe ezixhumanisa:
United Kingdom nama-amazon.co.uk abathintekayo
I-Germany ne-amazon.de partnernet
France nama partners amazon.fr
Spain nge amazon.es afiliados
I-Italy nama-amazon.it affiliazione
I-Japan nge-amazon.co.jp ehambisanayo
Kungenzeka ukuthi umbuzo wesikhathi nje kuphela kuze kube sekugcineni amazwe asele avulekele uhlelo lwe-Amazon oluhlanganyelwe futhi angaxhunyaniswa ne-akhawunti ephakathi yakwa-Amazon OneLink:
Kuzo zonke amazwe wamazwe ama-Amazon avuliwe ohlelweni lwe-amzone lwamazwe angamazwe angaphandle, faka i-ID yokulandelela ebhokisini elifanele, chofoza inkinobho yokugcina isixhumanisi, futhi uqinisekise ubunikazi be-akhawunti ngokuchofoza isixhumanisi, futhi ungene kwi-akhawunti yendawo yewebhu ukuze bonisa ukuthi ungumnikazi we-akhawunti.
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : Ama-Amazon ama-OneLink
Le khodi izovuselela ngokuzenzekelayo zonke izixhumanisi ezihlangene ze-Amazon kuwebhusayithi yakho. Akukho okunye okumelwe ukwenze ohlangothini lwakho!
Kopisha ikhodi kusuka kuwebhusayithi ye-Amazon OneLink, bese uyinamathisela endaweni ethile ku-HTML yakho, mhlawumbe kunyawo, futhi usebenzisa indlela engavamile.
Kunoma yikuphi, isivakashi sizochofoza kusixhumanisi ngemuva kokubuka ikhasi lewebhu, okumele lihanjiswe kuqala.
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : I-Amazon OneLink idonsele kwikhidi yomthombo wekhasi
Isikhathi sokuhlola uma sisebenza, ngokuya nje kuwebhusayithi yakho ekhasini eliqukethe ukuxhumanisa kwe-Amazon, nokuchofoza komunye wabo.
Bona isibonelo sethu, ngesixhumanisi esivela kuma-amazon.com, i-Amazon version yase-Amazon, kwiwebhsayithi yethu, ngemuva kokuxhuma wonke amanye amazwe amazwe e-Amazon.
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : Ikhasi le-ybierling.com ne-Amazon ehlangene nezixhumanisi
Ngemuva kokuchofoza kusixhumanisi, sifinyelela ekhasini elithile le-Amazon, elizobhekana nokuqondisa kabusha esitolo esiseduze sezwe.
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : Isicelo se-Amazon OneLink sokuqondisa kabusha esitolo sendawo
Esimweni sethu kulolu hlobo, iwebhusayithi yeFrance, eqinisile, njengoba sivakashela kusuka eFrance. Uma ngabe isayithi lase-US lisinikezwe, ngeke sikwazi ukukhokha, noma kuzodingeka sikhokhe ukuthunyelwa okungaphezulu ukumboza ukuthengiswa kwezwe elibizayo - futhi ulinde isikhathi eside kakhulu)
I-Amazon Associates OneLink - i-Amazon yonke inhlanganisela yokuxhumana : I-Amazon French iwebhusayithi ekhonjwe yi-OneLink ngemuva kokuchofoza isixhumanisi se-US esithintekayo
Uma ama-Amazon OneLink engasebenzi, qiniseka okulandelayo:
ama-Amazon amazwe ngamazwe aye ahlanganiswa futhi aqinisekisiwe kahle,
Izixhumanisi zama-Amazon ezifakwe kukhasi lewebhu zivela kwi-website yamazon.com yase-US. Lokhu akufanele kudingekile, noma kungangabazeki, kuzame,
Uhlangabezana nezinye izinkinga, noma ujabule ngalokhu okumangalisayo, futhi okulindile isikhathi eside, ukubuyekezwa kuma-Amazon abambisene nabo? Sazise emibhalweni.
Isixhumanisi se-Amazon esixhunywe yi-Amazon OneLink
Uma i-Amazon yakho onelink ingasebenzi, qiniseka ukuthi uxhumanise zonke izixhumanisi zakho ze-Amazon ezihlangene ne-akhawunti yakho ephakathi amazon.com.
Ngaphandle kwalesi script esengeziwe, isixhumanisi se-Amazon esihlangene sonke asikwazi ukuthola ekhasini lakho ama-Amazon, futhi uphakamise isixhumanisi kusuka kubangani bakho be-Amazon abaxhunyiwe ku-onelink okufana ne-geography yesivakashi.
I-Amzone international, I-Amazon OneLink, Ama-Amazon ama-OneLink, Ama-Amazon axhumanisa ama-globalizer, Ama-Amazon OneLink abambisene naye, Uhlelo lokusebenza lwe-Amazon, isixhumanisi somhlaba wonke, ukuxhumanisa ama-akhawunti e-Amazon, I-Amazon ehambisana nomgwaqo wamazwe omhlaba, isixhumanisi se-Amazon esihlangene, Amazon amazwe ahlukene amazwe, Amazwe ahlangene ama-Amazon, Izindawo ze-Amazon zomhlaba wonke, izinhlelo zamazwe ngamazwe, Amazon usa, I-Amazon com, Amazon uk, Ama-Amazon, I-Amazon france, Indawo ye-Amazon indawo, I-Amazon japan,